အောကျတိုဘာ 8, 2019 – Healthy Life Journal
ပါမောက္ခဦးနေ၀င်း (အရိုးခွဲစိတ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း) မေး. ဘာကြောင့် ခြေထောက်သွေးပြန်ကြောပိတ်တတ်ပါသလဲ ဆရာ။ ဖြေ. ခြေထောက်သွေးကြောပိတ်တာက အသက်ကြီးတဲ့သူတွေမှာ Atherosclerosis (သွေးလွှတ်ကြော အတွင်းသားမာကျောခြင်း)ကြောင့် အဖြစ်များပါတယ်။ လူငယ်၊ လူရွယ်တွေမှာတော့ ဆေးလိပ်သောက်တာကြောင့် Burger’s Disease လို့ခေါ်တဲ့ သွေးကြောပိတ်တဲ့...
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ (ဒီစာတင်တာ စေတနာမှားတယ်လို့ ပြောမယ့်သူနဲ့ သူခိုးလမ်းပြလို့ပြောမယ့်သူ ပေါ်အုန်းမလားတော့မသိပါ။ ခပ်လန့်လန့်ပဲ။) Yabba (ယာဘ)ဆိုတာ Methamphetamine (မက်သမ်ဖတမင်း)ဖြစ်တယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ရေခဲလို့လဲခေါ်တယ်။ သူများနိုင်ငံတွေမှာ Ice, Speed, Meth, Crystal, Crank စသဖြင့်ခေါ်တယ်။ Methamphetamine နဲ့...
– လရိပ်မေ အလှအပဆိုင်ရာ လျှို့ဝှက်ချက်က သင့်အိမ်က မီးဖိုချောင်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုတာ သိပါသလား။ ခရီးက ပြန်လာချိန်မှာ အသားအရေတွေ ပျက်စီးနွမ်းနယ်နေရင် ဒီလိုသဘာဝပစ္စည်းတွေကိုသုံးပြီး အသားအရေထိန်းသိမ်းပြုပြင်မှုတွေကို လုပ်သင့်ပါတယ်။ – သခွားသီးကပ်ခြင်း ခရီးကပြန်လာလို့ ပင်ပန်းနေချိန်မှာမျက်ကွင်းညိုပြီး မျက်လုံးတွေညောင်းညာနေရင် သက်သာစေဖို့ သခွားသီးကို ပါးပါးလှီးပြီး...
– ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) အမျိုးသမီးတွေအများစုက ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ အသားအရေ အထူးကြည်လင်တောက်ပနေတတ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလဟာ သင့်အသားအရေ၊ အသားအရောင်နဲ့ ဆံပင်သားတွေ ပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ဟော်မုန်းအဆင့်မြင့်တက်လာပြီး သွေးထုထည်လည်း များလာလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့် ဆံပင်တွေထူထဲစိုပြည်လာနိုင်သလို ခြောက်သွေ့နေတဲ့ အရေပြားကလည်း စိုပြည်လာနိုင်ပါတယ်။...
– ဇွန် အခွံချွတ်ထားတဲ့ ကောက်နှံစာ (ဥပမာ- ပေါင်မုန့်ဖြူ၊ ထမင်းဖြူ)နဲ့ သကြားပါတဲ့ ကော်ဖီတွေက အများအပြားစားသောက်ရင် သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကို ကမောက်ကမဖြစ်စေပြီး ကတုန်ကယင် ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဘာစားသင့်သလဲ သွေးတွင်းသကြားဓာတ်အပြောင်းအလဲ မဖြစ်စေဖို့ အဆီနည်းအသား၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ အဆီနဲ့ အခွံချွတ်မထားတဲ့ ကောက်နှံစာ(ဥပမာ-ဆန်လုံးညို၊...